MOV Ntụgharị maka Mac: tọghata MOV (QuickTime) ma ọ bụ na ihe ọ bụla na Format on Mac
> Resource> Mac> MOV Ntụgharị maka Mac: tọghata MOV (QuickTime) ma ọ bụ na ihe ọ bụla na Format on Mac
Wondershare Video Ntụgharị maka Mac (Mountain odum gụnyere) bụ a zuru-apụta MOV Ntụgharị maka Mac, nke na-enyere gị iji tọghata QuickTime MOV ọ bụla video format, sịnụ, MP4, M4V, DV, AVI, FLV, mpg, 3GP, 3G2, MKV, VOB, DivX, DVD wdg na Mac na elu video àgwà, na Anglịkan.
Dị ka anyị maara, Apple ka arounced MOV bụ otu n'ime Mac-akwado video formats. Ma iburu n'uche na e nwere ụfọdụ na-agaghị emeli: nání ụfọdụ video codecs (H.264 na MPEG-4) na kpọmkwem video mkpebi wdg na-akwado. Ọ pụtara a MOV faịlụ ga-ada na na na Mac ọ bụrụ na ọ ike izute chọrọ kpamkpam. Ọ bụ ya mere ọrụ na-emekarị na-egwu MOV (karịsịa ndị MOV faịlụ site na camcorders) on Mac na mkpa a MOV Ntụgharị maka enyemaka.
Ọ bụrụ na ị na-abịa gafee ụfọdụ QuickTime MOV faịlụ a na-apụghị nabatara Mac ma ọ bụ chọrọ iji tọghata videos ka Mac-dakọtara MOV maka playback na ụfọdụ Apple ngwaahịa, na-atụle ya mere. Nke a MOV video Ntụgharị maka Mac ẹkenam ebe a ga-ọlị ka ala. Na n'okpuru, ọ bụ a zuru ezu ndu ị pụrụ ịgbaso nzọụkwụ site nzọụkwụ.
1 Download, wụnye na-agba ọsọ a MOV (QuickTime) Ntụgharị Mac
Download a usoro site na ịpị njikọ n'okpuru. Mgbe ahụ, wụnye na-agba ya.
2 Tinye MOV (QuickTime) ma ọ bụ vidiyo ndị ọzọ a MOV Ntụgharị maka Mac
Mbubata MOV (QuickTime) ma ọ bụ ndị ọzọ faịlụ a usoro, e nwere abụọ ịnara ụzọ ị nwere ike họrọ:
Pịa "File" menu, wee họrọ "Ibu Ibu Media Files" menu-agagharị na-ahọrọ video faịlụ na ị chọrọ mbubata.
Import MOV ma ọ bụ vidiyo ndị ọzọ site na Ịdọrọ na idobe lekwasịrị faịlụ ka a Mac ngwa.
3 Họrọ MOV (QuickTime) ma ọ bụ vidiyo ndị ọzọ dị ka mmepụta format
See "Format" akara na ala nke a na ngwa si ebi ndụ. Wee họrọ ihe ị chọrọ. Ka ihe atụ, na-aga "Video"> "MOV" ma ọ bụrụ na ị chọrọ MOV (QuickTime) dị ka mmepụta usoro. Otú ọ dị, n'ihi na playback on a kpọmkwem Apple ngwaahịa dị ka iMovie, FCP, iDVD, iPhone, iPad, iPod, Apple TV wdg, na ị ga-mma ịhọrọ kpọmkwem-kachasị formats nyere site a na ngwa dabara ha kasị mma. Ọ dịghị mkpa ka ọ bụla oke.
4 tọghata MOV (QuickTime) on Mac (Mountain odum gụnyere)
Iji malite MOV akakabarede na Mac OS X, ị dị nnọọ pịa "tọghata" button na ala-nri akuku nke isi interface. Ọ na-mere. Nke a na-eji ngwa ga-akpaghị aka finishe video akakabarede maka gị. Ọzọ, ihe ị chọrọ ime bụ gaa mmepụta nchekwa ịchọta mmepụta faịlụ maka ojiji. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ha na ụfọdụ Apple ngwaọrụ, dị nnọọ ịdọrọ mmepụta faịlụ ka iTunes na mgbe ahụ mmekọrịta na ngwaọrụ.
WMV Ntụgharị maka Mac: tọghata WMV na ma ọ bụ ihe ọ bụla na Format on Mac
7 Atụmatụ maka iji flash mbanye na Mac
Apple iWeb maka Mac